१३ बैशाख २०७५ | April 26, 2018
‘डेन्जर जोन’मा देश ,रक्तपातको अर्को खतरा ! प्रचण्डको जोखिमले कता जाला मुलुक ?
यी हुन्,प्रचण्डले जोखिम मोल्नुका कारण,एमाले किन चाहदैन संशोधन
Saturday,3Dec, 2016 11:29 AM
केशबराज जोशी/ समाचार टिप्पणी
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुईवटा प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता दर्ता गरायो । मंगलबार अबेर दर्ता गराइएको प्रस्तावमा ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गरिएको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नंम्बरमा गाभ्ने गरी संशोधन प्रस्ताव भएदर्ता भएसँगै मुलुकमा एकपटक फेरी राजनीतिक संकट चुलिएको छ ।
तर संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसंगै जारी आन्दोलनले मुलुक अर्को भावनात्मक विखण्डनको भड्खालोमा जाने खतरा वढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधमात्रै होइन,आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेता टोपबहादुर रायमाझीको खुला विरोध र अर्का नेता कृष्णबहादुर महराको मौन विरोधका बाबजुत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो जोखिम किन मोले ? के प्रचण्डलाई आफुले संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा पाँच नंम्बर प्रदेशमा आगो वल्छ भन्ने हेक्का नभएकै हो ? त्यसो होइन् । यी ५ कारणले प्रचण्डले संविधान संशोधनको जोखिम मोलेका हुन् । भलै त्यसमा छिमेकीको चासो पनि हुनसक्छ ।
१. संविधान स्वीकार्यताको प्रयास
संविधान जारी भएपछि प्रचण्डकै समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यो अवस्थामा संविधानलाई अस्वीकार गरेको मधेसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको सकारात्मक मनोविज्ञानलाई समेटेर संविधानको स्वीकार्यता महसुस गराउनुपर्ने थियो । तर, ओली यो मामिलामा पुर्ण रुपमा असफल भए । उनले समस्यालाई समाधानको साटो आन्दोलमा उत्रिएका मधेसी जनतालाई विहारी,भारतीय लगायतको सकेत दियो । जसले मुलुक थप संकटमा फस्यो । त्यही असफलताले ओलीलाई ९ महिनामै सरकारबाट विस्थापित गर्न मुख्य भूमिका खेल्यो । त्यही कुराको महसुस भएर प्रचण्डले पहिलो जोखिम मोलेका हुन् । यद्यपी यसको परिणाम खतरनाक बाटोमा जाने सम्भावनाका छिटाहरु प्रष्टै देखिसकिएका छन् ।
२. निर्विकल्प विकल्प
दोश्रो कुरा पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले टसमस गर्न नदीने र सूदुरपश्चिममा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कैलाली, कञ्चनपुरको एउटा सियो पनि हल्लाउन अडान,त्यसमाथी मधेसीलाई मधेसमा दुई प्रदेश चाहिने यो प्रचण्डका लागि कुनै सहज यात्रा थिएन् । पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई झिक्दा ५ नम्बरमा मधेसी तथा थारु बाहुल्य प्रदेश बन्ने र मधेसको माग कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन हने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगे । यसबाहेक प्रचण्डसंग अर्को विकल्प थिएन् ।
३. काँग्रेसको समर्थन, मधेसीका हरियो झण्डा
मुख्य कुरा ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने विषयमा केही नेताहरुलाई छाड्ने हो भने सत्ता गठबन्धनमा एकमत नै देखिने अवस्था छ । यही कारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन प्रचण्डलाई सबैभन्दा ठुलो राहत वा बाटो मिल्यो । त्यसमाथी संविधान संशोधन प्रस्ताव नल्याए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मधेस तताउने मधेसी मोर्चाको चेतावनी प्रचण्डका लागि अर्को बाध्यतात्मक अवस्था थियो । जसले प्रचण्डलाई थस संकटमा पर्र्यो,जसकारण उनले अर्को जोखिम मोले ।
४. मधेस छुट्टै राष्ट्र बन्ने खतराको संकेत
एमालेले यो विषय स्वीकार गरेपनि वा नगरेपनि मधेसका लागि मात्रै नभई यो मुलुककै लागि विखण्डनको नारा बोक्ने सिके राउत निकै खतरनाक चुनौति हुन् । उनी मधेस खलग देश बनाउने अभियानमा सक्रिय छन् । यसविचमा आन्दोलनका क्रममा मधेसी दलका नेताहरुले नै पटक पटक भन्दै आएका थिए, कि अहिले त प्रदेश मागिरहेका छौँ दिएनौ भने ‘मधेस’लाई ‘देश’ बनाउँछौँ ।’ यो आम नेपालीका लागि स्वीकार्यताको विष हुनसक्दैन् । यहि डर प्रचण्डलाई पनि थियो । सहमतिका लागि सीमाङ्कन कतै न कतै चलाउनुको विकल्प नै छैन । थोरै जोखिम मोल्दा जित जितको अवस्था हुन्छ भने किन अघि नसर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।
५. पश्चगामी चलखेल, ज्ञानेन्द्रको सक्रियता
नेपालमा राजनीतिक संकटहरु देखा पर्ने अवस्थामा पश्चिमा शक्तिहरुको निकै चलखेल गर्ने गरेका कयौ दृष्टान्तहरु छन् । त्यही पश्चिमा शक्तिको अभियान सफल पार्न नाइकेको भुमिका निर्वाह गर्दैथिए, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह । यसबिचमा उनले नेपालमा प्रमुख २ छिमेकी भारत–चीनसँग एक किसिमको संवाद गरिसकेका छन् । ज्ञानेन्द्रको यो चलखेलले प्रचण्डलाई सशंकित बनाएको थियो । उनले यहि कुराको संकेत माओवादी निकट पत्रकारको वैठकमा निकालेका थिए । त्यसैले पनि लामो संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र,धर्मनिरपेक्षता,समावेशी व्यवस्थामाथीको खतरा टार्न यो कदम उठाए ।
प्रस्ताव फेल भए राजीनामाको ‘मुड’मा प्रधानमन्त्री
यसबिचमा एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई सहमति दिन्न भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ । मोर्चाका केही नेताहरूले चारबुँदे प्रस्ताव नमान्ने बताउदै आएका छन् । यसो हेर्दा प्रचण्डले जे हिसाबकिताब गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए,त्यो आफैमा प्रत्युपादक सावित हुने खतरा वढेको छ ।
सरकार बनाउँदा तीनबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने भनिसकेकाले माओवादी र कांग्रेस संशोधनका लागि सहमत छन् । तर अब आफैले ल्याएको प्रस्ताव फेल भए प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकट पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा उनले राजीनामा दिनुको विकल्प हुनेछैन् । यहि कुरा उनले मधेसी मोर्चालाई पनि भनिसकेका छन् । उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि एक वैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भनेका छन–‘ म जसरी पनि प्रस्ताव दर्ता गर्छु । तपाईंहरूले साथ दिने हो कि होइन प्रस्ट पार्नुस् । यदि प्रस्ताव फेल भयो भने गठबन्धन त भत्किन्छ नै मैले नैतिक हिसाबले राजीनामा पनि दिनुपर्छ ।
पुरानै अडानमा फर्किने प्रचण्डको तयारी
मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्रस्ताव पारित नहुने र सबै आ–आफ्नै अडानमा रहने भए आफू पनि पार्टीको पुरानै प्रस्तावमा फर्किने बताएका छन् । यसले संघियता नै धरापमा पर्ने खतरा अर्कोतीर छ भने मुलुक कहिल्यै नटुङीने राजनीतिक संकटमा फस्नसक्ने खतरा पनि त्यत्तीकै छ । आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेमा आफ्नो पार्टीले यसअघि राखेको प्रस्तावलाई संशोधनमा लैजाने र पदत्याग गर्न सक्नेसम्मको तयारी प्रचण्डको छ । राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा माओवादीले ११ प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । अहिलेको संविधानमा सात प्रदेश राखिएकोमा माओवादीको नोट अफ डिसेन्ट थियो ।
एमाले किन चाहँदैन संशोधन ?
एमालेले अहिले संविधान संशोधनमा अवरोध गर्नुको कारण मूलतः देशको भावी राजनीतिमा आफूलाई ‘नम्बर एक पार्टी’ बनाउने नियत रहेको प्रष्टै देखिन्छ । यसको लागि एमालेको वैचारिक जग र पार्टीकै विचार वा सिद्धान्तले मात्रै सम्भव थिएन । वैचारिक रुपमा खुइलिदै गएको एमालेलाई यसबिचमा चर्चामा आउनका लागि नयाँ विचार र नयाँ नारा आवश्यक थियो । यो नयाँ सन्दर्भको जग एमालेले ओली सरकारको पालामा चीनसँग लचकता अपनाएर गर्न खोज्यो । भारतसँग विभिन्न मोर्चामा अडान लिएको देखाएर जनविश्वास बटुलेको पनि हो । तर, भारतीय डिजाइनमा दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको सक्रियतामा ओली सरकार ढलेपछि भावी चुनावसम्म एमाले नेपाली राष्ट्रवादको नारासहित एक नम्बर पार्टी बन्न सकिन्छ भन्ने विश्वास एमालेलाई थियो । तर यहि घटनाक्रमले एमाले पार्टी बिस्तारै वामपन्थीबाट दक्षिणपन्थी पार्टीमा रूपान्तरित हुने क्रममा रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसैले पनि एमाले प्रचण्ड सरकारले ल्याएको संशोधनको प्रस्तावलाई भारतीय डिजाइन भएको चर्चा गर्दैछ । त्यो भ्रम पार्न सकिए चुनावमा आफुलाई सहज हुने एमालेको बुझाई छ ।
उग्र राष्ट्रवादी भावनाले देश बन्दैन
माटो र स्वभीमानको माया हरेक नागरिकलाई हुन्छ । तर विरोधका नाममा वेअर्थको विरोध वा समर्थनका नाममा अन्धवादी हुने दुवै प्रवृती खतरनाक छ । उग्र राष्ट्रवादी भावनाले देश बन्दैन । कुनै समयमा एमाले कुनै समय देशभक्त पार्टी भनी चिनिन्थ्यो । तर उसले गरेका महाकाली सन्धी,टकनपुर लगायका कयौ विवादीत निर्णयले एमालेको राष्ट्रवाद घामझै छरपस्ट भइसकेको छ । देशभक्तिको भावनाले सबै वर्ग र समुदायको हित र रक्षा हुन्छ, जुन कांग्रेस–एमालेले गर्न सक्थे नेपालमा, तर यी दुवै पार्टी यस सन्दर्भमा चुक्दै आएका छन् । एउटा राष्ट्रवादी आफ्नो देशको सबै कुरा खासगरी इतिहासलाई श्रेष्ठतामा देख्दछ र त्यसैमा घमण्ड गर्छ । तर, देशभक्तले अल्पकालीन नाराबाट राजनीतिलाई सोच्दैन र इतिहासमा मात्र रमाउँदैन । त्यसैले एकपटक नेपालमा को राष्ट्रवादी र को राष्ट्रघाती पेचिलो बहस चलाउन जरुरी छ ।
बाबु हुनु त सुपा तामाङ जस्तो
‘धुर्मुस–सुन्तलीले कता–कता नमुना बस्ती बनाए रे, हाम्रो सरकारले त्रिपालका टहराको नमुना बनायो’
हालत खराब भएको मुम्बई इन्डियन्सलाई बचाउन सक्लान् सचिनले ?
​गृह मन्त्रालयले गर्‍यो ६० सीडीओको सरुवा, को कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)
​इयरफोनले लियो १३ स्कूले बच्चाको ज्यान
​मौलिक हकसँगै कर्तव्य पालना आवश्यक : प्रधानमन्त्री ओली
१२ बैशाख, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक उपभोगसँगै कर्तव्य पालना गर्नु पनि सबैको दायित्व भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा आज उनले संविधानले व्यवस्था गरेका सबै मौलिक हक महत्वपूर्ण भएको बताउँदै मौलिक हकसँगै कर्तव्य पनि सँगै गाँसिएको धारणा व्यक्त गरे । सूचनाको हकको अभ्यासमा प्रारम्भिक, आधारभूत र मौलिक सूचनाको हकलाई प्राथमिकतामा
छिमेकी जिल्ला समेटेर एकीकृत विकास : अध्यक्ष प्रचण्ड
१२ बैशाख, चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन र छिमेकी जिल्लालाई समेटेर एकीकृत विकासको मोडल तयार गर्न लागिएको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको चितवनको विकास र समृद्धिबारे अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नवलपुर, मकवानपुर, धादिङ र पर्साको ठोरी क्षेत्रलाई समेत समेटेर यहाँको विकास योजना बनाउनु पर्ने बताए ।
​पार्टी एकताबाट कोही भाग्न सक्दैन : पोखरेल
११ बैशाख, काठमाडौ । रक्षामन्त्री एवं नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकताबाट आफ्नो पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र उम्कन नसक्ने बताएका छन् । नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनले आज आयोजना गरेको ‘वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति र मुस्लिम समुदायको अधिकार’ विषयको विचार गोष्ठी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एकताबारे कुनै अन्योलमा नपर्न आग्रह गरे । मिलाउन पर्ने सबै
१३ बैशाख, काठमाडौं । चालकले इयरफोन लगाएर स्कूल बस चलाउँदा १३ बच्चाको ज्यान गएको छ । रेलसँग ठोक्किएर स्कूल बस दुर्घटनामा परेको हो । इयरफोन लगाएर बस चलाइरहेका ड्राइभरले रेलको हर्न नसुन्दा रेल लिग क्रस गर्ने बेला दुर्घटना भएको हो । यो दुघटना भारत उत्तर प्रदेशको कुशीनगरको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार घटनामा ८ जना गम्भीर आइते भएका छन् । रेलमा भने यात्रु थिएनन् ।
नाइजेरियामा चर्च आक्रमणमा परी सोह्रको मृत्यु
१२ बैशाख, एजेन्सी । नाइजेरियाको मध्यउत्तरतर्फ पर्ने बेन्यु राज्यमा रहेको एउटा चर्चमा भएको आक्रमण परी कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । राज्य सरकारका प्रवक्ता टेर्भेर अकासले शङ्कास्पद गोठालाहरुले चर्चमा आक्रमण गरेका र उनीहरु मारिएका जानकारी दिए । घटनाका कारण राज्यका गभर्नरले आफ्नो घरायसी विदा र भ्रमण छोट्याएको उनले बताए । फुलानी समुदायका गोठालाहरुको आक्रमणबाट उनीहरुको मृत्यु भएपछि सुरक्षा चुनौती
​क्यानडामा सडक दुर्घटना हुँदा दश जनाको मृत्यु
११ बैशाख, एजेन्सी । क्यानाडाको ठूलो सहर टोरोन्टोमा सोमबार भएको एक सडक दुर्घटनामा परी दश व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । एक व्यक्तिले भाँडामा लिएको भ्यान पैदल यात्रुको लागि बनाइएको मार्गमा लगि जथाभावी रुपमा ठक्कर दिदा कम्तीमा १० जना मारिएका छन् । यस घटनामा परी अन्य १५ जना घाइते भएका बताइएको छ । प्रहरीका अनुसार यो एक योजनाबद्ध आक्रमण हो । प्रत्यक्षदर्शीअनुसार चालकले पैदलमार्गमा तीव्रगतिमा भ्यानलाई
लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?
कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
माइत जाने चेलीलाई ५ सय ८० शब्दको सुझाव
माइत भन्ने बित्तिकै हरेक महिलाको अनुहारमा रौनक आउँछ । माइतको मोह महिलाले जीवनभर भुल्दैनन् । पतिले घरमा जतिसुकै सुख दिएको होस्, माइतमा पाइने सुखका अगाडि ती सबै कम लाग्छन् । माइतबाट सानो बोलावट मात्रै आउनुपर्छ, जानका लागि तुरुन्त तयार नहुने को नै होला र ? माइत जानु नराम्रो होइन । तर, प्रायः के पनि देखिन्छ भने जुन खुसी र उत्साहले महिलाहरु माइत जान्छन्, त्यति नै खुसी लिएर भने फर्कदैनन् ।
अध्यक्ष पद नै एमाले–माओवादी एकताको बाधक ! ओली र दाहालको आ–आफ्नै रणनीति
निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने बताएका दुई नेताले एकता प्रयास ठोस रुपमा अघि नबढेको बेला यस्तो कुरा बताउँदा दुबै पार्टीको एकता चाहनेलाई हौसला मिलेको थियो । आशा जागेको थियो । तर, एतिका दिन बितिसक्दा पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन ।
Copyright © 2018 Newssewa. All Rights Reserved.